आजको राशिफल - मिति २०७४ साल भदौ ३० गते दशमी तिथि शुक्रबार
HOME » आजको राशिफल - मिति २०७४ साल भदौ ३० गते दशमी तिथि शुक्रबार
डिसी नेपाल , ३० भाद्र २०७४
संघर्ष गर्नु परे पनि हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ भने आम्दानी बढ्नेछ। उद्योग र व्यापारमा फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सकिनेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ।
बोलीको विपरीत अर्थ लाग्नाले समस्यामा परिनेछ। परिबन्धले काममा बाधा पुर्याउन सक्छ। आफ्नो प्रतिफलबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। भैपरी आउने खर्चका कारण त्यति सञ्चय गर्न नसकिएला। वचन पुर्याउन नसक्ता अरूले आलोचना गर्न सक्छन्। आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ। शुभचिन्तकहरूको सुझाव मनन गर्दा फाइदा हुनेछ
भैपरी आउने खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ। काममा धेरै खर्च गरेर पनि त्यति लाभ उठाउन नसकिएला। फाइदाका पछि लाग्दा आफ्नै धनमाल गुम्न सक्छ। साथीभाइसँग पनि असमझदारी बढ्न सक्छ। सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्। अवसरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ला। परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ।
मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सफल भइनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। साथीभाइले हिम्मत जगाउनेछन्। प्रयत्न गर्दा नेतृत्व हातलागी हुने समय छ। भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ।
अस्वस्थताले लक्ष्य प्राप्तिमा विलम्ब हुनेछ। आफ्नै बेहोसीले नोक्सान पुर्याउला। अवसरको खोजीमा निकै दौडधुप गर्नुपर्ला। काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थितिसमेत आउन सक्छ। समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त भए पनि आफ्ना काम अवरुद्ध बन्न सक्छन्। तापनि चुनौतीहरू पन्छाउँदै केही काम बनाउन सकिनेछ।
परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। कामबाट तत्काल फाइदा नउठ्न सक्छ। न्यून उपलब्धिमै चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति आउला। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहनेछ। अरूका विषयमा चासो लिँदा व्यर्थैमा झमेला बेहोर्नुपर्ला। सहयोगीहरूको भर पर्दा काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। बेसुरमा दिएको वचनले आफैंलाई अप्ठ्यारो पार्नेछ।
मानसम्मान प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चालु बन्नेछ। परिवारजन तथा आफन्तबीच आत्मीयतामा कमी आउन सक्छ। यात्राको प्रक्रियाले खर्च बढानेछ। तापनि व्यावसायिक कामले यात्रा गराउला। उद्योग र व्यापारमा लाभ हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। समयमा लोकाचारका पछि लाग्दा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्।
अप्रिय समाचारले दु:खी बनाउला। अध्ययनमा त्यति प्रगति गर्न नसकिने र व्यापार व्यवसायमा समेत सोचेको फाइदा नउठ्ने समय छ। अस्वस्थताले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला। आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। मनको डरले सताए पनि केही समय पर्खंदा स्थितिमा सुधार आई उन्नति हुन सक्छ।
परिस्थिति अलि प्रतिकूल रहनेछ। हडबड गर्नाले काम बिग्रन सक्छ। बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। नजिकका साथीभाइ टाढिनेछन् भने अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइएला। पशुधन र कृषिबाट सामान्य लाभ मिल्न सक्छ। साइनो गाँस्नेहरूले व्यवहारमा अप्ठ्यारो पार्नेछन्। काम बिग्रने डरले सताए पनि आफ्ना योजना गोप्य राख्नुहोला।
६१ बर्षिया हजुरआमाले आफ्नै ८ बर्षे नातिसँग यसरी गरिन् बिहे (भिडियो सहित)
दैनिक एउटा केरा खानाले यी रोगहरु ठिक पार्छ, यसका फाइदा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ!
श्रीमानको मृत्युको हल्लापछि श्रीमतीले गरिन आफ्नो र दुई छोराको हत्या, जब श्रीमान जिउँदै भेटिए
हायात होटलमा गुण्डागर्दी:पेस्तोल देखाएर धम्काउने नेताका छोराले गरे आत्मसपर्मण (भिडियो)
घरेलु मैदानमा रियल स्तब्ध
मेस्सी र रोनाल्डोसहित यी ला लिगामा बसैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
जेनोआविरुद्ध रोनाल्डोले गोल गर्लान ?
रानीबारी हत्याप्रकरण : १४ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ
राष्ट्र निर्माणमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : दिनानाथ शर्मा
छठसम्म संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं : नेतृ चौधरी
ओली सरकारले दुई तिहाई बहुमतको दम्भको ताण्डव नृत्य देखाईरहेको छ : बस्नेत